Kismaayo News » Britain: Ninkii Xaanshida liqey oo la baacsanayo
Britain: Ninkii Xaanshida liqey oo la baacsanayo
Kn: Nin Soomaali ah oo lagu tuhunsanyahay in uu ka tirsanyahay Al-Shabaab oo muddo kormeer iyo dabogal ku socdey dalka Britain ayaa la la’yahay meel uu jaan iyo cirib dhigey kadib markii sida la sheegey uu ka muluq siibtey aalado iyo dad illaalo ka hayay.
Ninkani oo lagu magacaabo Ibraahim Meeygaag oo 26 jir , ahna qofka sawirka ka muuqda ayaa la sheegey in uu u safray Soomaaliya sanadkii 2007dii, kadibna markii uu soo laabtay lagu xirey garoonka Dubai isagoo wata 3 taleefoonada gacanta ah, isagoo liqey xaanshi uu nambar ugu qornaa, taasi oo laga soo mantajiyey.
Markaasi wixii ka dambeeyey waxaa lagu hayay illaalo gaar ah, iyadoo maalin kasta uu saldhiga Bileeska iska soo xaadirin jirey, meelo la ogyahayna jiifsan jirey. waxa uu Ibraahim qalday saacad isaga lagula socon jirey gooraha uu guriga imaado, taasina ay sahashay in uu raadaarka ka boxo si lama filaan ah.
Haatan wasiirka arrimaha gudaha Britain Teresa May ayaa maxkamad geeysatay codsi ay dooneysi in amar maxkamadeed daaha looga rogo xogo markii hore sir ahaa oo ninkani laga hayo si baadigoobka Police-ka uu u fududaado.
Illaa 50 qof oo dhalashada Britain heysta ayaa lagu tuhunsanyahay in ay Alshabaab ka barbar dagaalamaan.
Waxaa dad ugu war dambeeysay taariikhdu markii ay ahayd 26dii December, oo ku beegneyd maalinta Feertanka Britain oo ah maalin fasax ah oo ku xigta ciida masiixiga oo dadka dalkaasi isu geeyaan hadiyado ka yimaado dadka ay u shaqeeyaan ee badrooniyadda ah.